Uyisebenzisa kanjani iYouTube ngokungaziwa ukuba ugcine iiNkcukacha zaKho zaBucala
Ngu-Ryan C. Williams
Ixabiso le-VAT 196 yesitalato
Igama lakho lomsebenzisi kwi-intanethi. Uninzi loluntu lweYouTube, yiyo yonke into oyiyo. Oku kuthetha ukuba awunyanzelekanga ukuba wabelane ngeenkcukacha zakho.
Ukubhalisa ngeYouTube yinkqubo engaziwayo - awudingi kunika igama lakho, idilesi yakho ye-imeyile. I-YouTube igcina olo lwazi luyimfihlo, ke nyani, bonke abanye abasebenzisi beYouTube bayazi ngawe ngokuzenzekelayo ligama lakho lomsebenzisi. Naluphi na olunye ulwazi lutyhilwe nguwe.
Gcina imfihlo yakho. Mababize uBatman, hayi uBruce Wayne. I-YouTube yindawo yezigidi zabantu, kwaye kunqabile ukuba wazi ukuba ngubani onxibelelana naye. Kungenxa yoko le nto eyona mgaqo-nkqubo ubalaseleyo-kukusebenzisa i-Tube ngaphakathi kwesitayile segama lakho lomsebenzisi elingaziwayo.
Oku kulandelayo luluhlu lwezinto ekufuneka ziqwalaselwe xa usebenzisa iYouTube ngokungaziwa.
Sukusebenzisa igama lakho elipheleleyo njengegama lakho lomsebenzisi. Yiba ngu-johniscool kunokuba ujohnsmith. Oko kunokubonakala kucacile, kodwa akusoloko kunjalo. Kungenxa yokuba abantu abaninzi basebenzisa iYouTube kanye kanye ngenxa yesi sizathu: ukufumana amagama abo phaya.
Ukuba uliqhula, kunokwenzeka ukuba ufuna igama lakho kwiividiyo zakho. Ufuna iarhente. Ufuna ukuqeshwa. Iyavakala kuphela. Ukuba awuzami ukuba nodumo kwiYouTube, nangona kunjalo, musa ukuthumela igama lakho elipheleleyo naphina.
Musa ukutyhila kakhulu kwiividiyo zakho. Ukuba, ngasizathu sithile, ividiyo yakho inemifanekiso engaphandle kwendlu yakho, kunqande ukubonisa idilesi yakho epheleleyo.
Ngamanye amagama, ukuba ubona inani lama-24 emnyango ze emva koko ubonane nomyeni wakho nihamba nenja idlula uphawu lwesitalato olufundayo IPrinceton , unengcinga entle yendawo ohlala kuyo. Ngesizathu esinye, kuphephe ukubonisa ipleyiti yelayisensi kwimoto yakho.
Lumka abantwana kunye neevidiyo zosapho. Enye yezona zinto zibalaseleyo ngeYouTube kukuba ungabelana ngokulula ngevidiyo nosapho kunye nabahlobo kwiikhilomitha zonke. Kwiividiyo zosapho, zifake njenge iividiyo zabucala - ezo zinokujongwa kuphela ngabantu obatyumbileyo.
Musa ukutyhila kakhulu kwisiteshi sakho. Ukwenza isitishi sakho ngokwezifiso kwiYouTube yindlela entle yokuzazisa kuluntu lwaseYouTube, ukudala indawo apho abasebenzisi banokuya khona ukuze babone zonke iividiyo ozilayishayo kunye nokufunda ngakumbi ngawe.
Nangona kunjalo, qiniseka ukuba abafundi kakhulu. Ngaphandle kokuba ujonge ukuduma okanye ufuna ukunxibelelana naye nawuphi na umntu okwi-Tube, musa ukuthumela igama lakho elipheleleyo okanye ulwazi lomntu. Khumbula ukuba ijelo lakho alikho ngasese kunalo naliphi na elinye iphepha ku-YouTube.
Cinga kabini ngaphambi kokunika idilesi yakho ye-imeyile. Abantu bahlala belibala ukuba iYouTube yindawo yokuncokola kunye nendawo yokwabelana ngevidiyo. Ungathumela umyalezo kwabanye abasebenzisi, kwaye banokuthumela umyalezo. Kodwa hlala ucacile kweli nqanaba: Nawuphi na umyalezo owuthumelayo okanye owufumanayo uyathunyelwa ukugqitha Youtube.
Ngamanye amagama, ukuba umntu ubukele enye yeevidiyo zakho aze akuthumelele umyalezo, uwuthumele loo myalezo kwigama lakho lomsebenzisi. Ayaziwa. Akanayo idilesi yakho ye-imeyile yokwenyani. Ungatshintsha imiyalezo ngokungachazwanga - usebenzisa nje igama lomsebenzisi- nayo nayiphi na enye iTuber, ke akukho sidingo sokwenyani sokuba unike idilesi yakho ye-imeyile kuye nawuphi na omnye umsebenzisi.
Xanax ithatha ixesha elingakanani ukusebenza
Cinga ngononophelo ngento oyibhalayo kwimiyalezo, amagqabantshintshi, okanye ingxelo. Mhlawumbi awucwangcisi ukungena kwimilo nabantu abakwiTyhubhu, kodwa unokumangaliswa yindlela ekulula ngayo ukuba izinto zishushu.
Ezinye iiTubers zishiya amagqabantshintshi, kwaye unokulingwa ukuba ucime impendulo. Ayikuko ukwaphula, kodwa musa ukuba nomsindo kangangokuba ulungiselele indawo yokuhlangana yomlo wobomi bokwenyani. Oko kunokuvakala ngathi kukuphambana, kodwa uyakholelwa okanye hayi, kuyenzeka.
diphenhydramine kunye noxinzelelo lwegazi
Kwicala elisezantsi, usenokungacwangcisi ukuthandana kwiTyhubhu nokuba, kodwa unokuzifumana ubandakanyeka kutshintsho lomyalezo kunye neTuber enomtsalane phaya. Yikholwe okanye ungakholelwa, oku kuyenzeka, nako.
Kwaye kwenzeka ngamabona-ndenzile-uhlala esixekweni sakho! Usisityebi, ugqirha wobuchopho, ujongeka njengoGeorge Clooney, kwaye ufuna ukudibana nawe ukuze usele. Ngaba ufanele uhambe? Oko kuxhomekeke kuwe, kodwa ungalibali ukuba lo ngumntu ongaziwayo, kwaye usenokungabi ngumtyholi mhle ombonayo kwiividiyo zakhe.
Nantoni na oyenzayo, musa ukuthumela loo mntu ulwazi lwakho. Ukuba uphuma kwilungu lomzimba kwaye uyadibana naloo mntu kwaye iintlantsi aziphaphami, ngekhe ufune ukuba ayazi ukuba angabuyela njani kunxibelelwano.
Musa ukuxelela nabani na igama lakho eliyimfihlo. I-YouTube iya kwenza ezelwe v ngu ndikubuze ukuba uveze ipaswedi yakho ngaso nasiphi na isizathu. Ukuba ufumana umyalezo ovela kuYouTube ubuza iphasiwedi, loo myalezo awuveli kuYouTube. Uqhathwa ngumntu, ngandlela thile, ngandlela thile.
Musa ukuba netyala lokunyelisa. Libel Kukungcolisa amagama abhaliweyo okanye aprintiweyo, imifanekiso, okanye nangayiphi na indlela ngaphandle kokuthetha. Oku kuthetha ntoni kuwe kwi-YouTube kukuba kufuneka ulumke ekwenzeni izityholo okanye izityholo malunga nezinye iiTubers.
Musa ukuthi umntu ulisela. Musa ukuthi umntu unesifo, ukuba uphambene, ungumbulali, okanye uyakhohlisa kwiqabane lakhe. Ngaba uza kumangala? Isenokungabikho, kodwa ayinakwenzeka.
Musa ukucinga ukuba i-YouTube iyazi ukuba ngubani wonke umsebenzisi. Xa umntu ebhalisa ngeYouTube, konke akunikezelayo yidilesi ye-imeyile. Akho gama. Akukho khadi lamatyala. Ke musa ukwenza impazamo ngokucinga ukuba i-YouTube ine-411 kuwo wonke umsebenzisi okanye ukuba wonke umsebenzisi ekugqibeleni angabekwa uxanduva ngokuziphatha kwakhe.
Umjikelo opinki r 33
amayeza okuchama ngaphambi kwexesha
ungayithenga i-amoxicillin phezu kwekhawuntari
iyeza elifanelekileyo lomqala obuhlungu
Ixabisa malini iipepens
vula ityala kwi-ebay